Waxyaabaha khuseeya oggalaanshaha shaqada (AT-UND) iyo sharciyada lagu shaqaynkaro - Migrationsverket
Frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta – somaliska
Ma heli­karaa anigu oggo­laans­haha shaqada (AT-UND) inkastoo aan hasto go’aan masaa­furin ah?
Waa haa, waad helikartaa in lagu siiyo oggolaanshaha shaqada (AT-UND) xitaa hadda aad haysato go’aan masaafuris ah ilaa iyo inta aad diyaarka u tahay inaad la shaqayso Hay’adda laanta socdaalka si wadanka lagaaga dhoofiyo.
Anigu ma heli­karaa oggo­laans­haha shaqada (AT-UND) xitaa haddii aanan haysan kaarka- caddaynta (ID-hand­lingar)?
Waa haa, haddii ay Hay’adda laanta socdaalku u aragto inaad si uun uga gacan uga geysanaysid sidii baaritaan loogu samayn lahaa caddayntaada.
Ma khasab ayey aniga igu tahay haddii aan ahay ilmo keli­giis wadanka yimi (ensam­kom­mande barn) inaan helo oggo­laans­haha shaqada (AT-UND) si aan u shaqeeyo?
Waa ilmaha keligiis wadanka yimi (ensamkommande barn) ee ay da’diisu ka weyntahay 16 sannadood waa inuu haysto oggolaanshaha shaqada (AT-UND) si uu wadanka Iswiidhan uga shaqeeyo. Ilmaha ay da’diisu ka yar tahay 16 sannadood uma baahna oggolaanshaha shaqada (AT-UND) si uu fasax baraktiig ugu helo, shaqooyinka fudud ama hawla yar yar. Hase yeeshee qofka waalidka ah ee leh daryeelka iyo mas’uuliyada ilmaha ama qofka loo xilsaaray inuu ilmaha ka mas’uul yahay (god man) ayaa oggolaasho laga rabaa si uu ilmuhu u shaqeeyo. Ka feker mushahaarada ama haddii si kale lacag loo siinayo tusaale ahaa kaar hadyad lagu siiyey (presentkort) saamayn ayey ku yeelanaysaa in la siiyo kaalmada dhaqaale sida uu dhigayo LMA-gu.
Ma khasab ayey aniga igu tahay inaan hasyto oggo­laans­haha shaqada (AT-UND) haddii aan rabo inaan shaqeeyo xilliga xagaaga oo keliya (sommar­jobba)?
Waa Haa, haddii aad tahay 16 jir ama aad ka weyn tahay. Haddii aad ka yar tahay 16 jir waxaad u baahan tahay inuu qofka waalidka ah ee leh daryeelka iyo mas’uuliyada ilmaha ama qofka loo xilsaaray inuu ilmaha ka mas’uul yahay (god man) ayaa oggolaasho looga baahan yahay.
Hay’adda laanta socdaalku miyey ku khasban tahay inay ansixiso marka aniga lay shaqaa­lay­nayo?